About Us - Ningbo Mianxuan I & E Co., Ltd
efektri yethu eye certification ICTI International Toy Association, ISO9001: 2008 nolawulo lomgangatho kwezatifiketi inkqubo, EU BSCI bali iziqinisekiso uxanduva lwentlalo kunye nesiqinisekiso FSC. amabanga yethu imveliso ziquka iithoyi zokufundisa, izindlu unodoli, iiseti uloliwe, iiphazili zomthi, izixhobo zomculo, iibhloko zomthi njl Kukukhokela yonke inkwenkwe & intombazana ilekese, abonwabileyo, yobuntwana enomtsalane ukuba iminqweno yethu emihle.
Zonke iimveliso zethu enziwa kunye nomgangatho ingqalelo iimpawu kunye iinkcukacha ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu. Thina vula ukwenza iimveliso OEM ngokwe kuyilo abaxumi '. Nge amava atyebileyo kunye nolwazi yobungcali kwi zokudlala & yobugcisa, siza kukunika icebiso elihle, elo kwenza imveliso yakho ikhuseleke Kwathi zonke iimvavanyo eziyimfuneko kwaye intengiso okulungileyo emarikeni.